असहाय र विपन्नको लागि घर बनाइदिँदै बेलबारी नगरपालिका - निष्पक्षखबर
असहाय र विपन्नको लागि घर बनाइदिँदै बेलबारी नगरपालिका
बेलबारीः मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले विपन्न तथा असहाय परिवारका लागि वडा नम्बर ३ मा ४० ओटा घर बनाइदिन थालेको छ । सहारा नेपाल, र ह्याबिटेड नेपालको सहकार्यमा नगरपालिकाले घर बनाइदिन थालेको हो ।
वडा नम्बर ३ मा बन्ने घरहरुको शुक्रबार बेलबारी नगरपालिकका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीले शिलान्यास गरे । विपन्न, असहाय, एकल दलित तथा पिछडा वर्गका मानिसलाई नगरपालिकाले निःशुल्क घर बनाइदिन थालेको हो । एक घर बराबर ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । घर निर्माणमा नगरपालिकाले ५० प्रतिशत तथा सहारा नेपाल र ह्याबिटेड नेपालले ३३ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गर्ने भएका छन् । त्यस्तै, १६ दशमलव ३३ प्रतिशत भने जनश्रमदान उपयोग गरिने भएको छ ।
यसअघि बेलबारीको वडा नम्बर ११ मा ४० वटा घर बनेका छन् । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १ सय वटा घर बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । ४ नम्बर वडामा २० वटा घर चाँडै बनाइने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
भोलि जेठ १२ देखि इटहरीमा ३ घण्टा अत्यावश्यक सामग्रीका पसल खुल्ने
५५ पैसा बढ्यो डलरको भाउ
यी हुन् बजेटमा सम्बोधन भएका प्रदेश नम्बर १ का क्षेत्रहरु
विराटचोकः अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७\_०७८ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वी क्षेत्रका केही योजनाको नाम उल्लेख गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले सम्बोधन गरेका क्षेत्र यसप्रकार छन्ः
१. कोशी अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरिने,
२. ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमअन्तर्गत रतुवा–मावा, बक्राहा, त्रियुगालगायतका नदीमा तटबन्ध गरिने,
३. उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइटको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिने,
४. संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइने,
५. पाथीभरा, विराट क्षेत्र, वराहक्षेत्र, हलेसी क्षेत्रलगायतका धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि अवश्यक रकम विनियोजन,
६. कोशीलगायतका नदीमा आधारित थोक पानी वितरण प्रणाली तथा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको,
७. दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना ४ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्त लगानी विधिमा निर्माण शुरु हुने,
८. नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा माथिल्लो अरुण, किमाथांका, अरुण, तामाकोशी ५ आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गरिने,
९. जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरिने,
१०. झापाको अनारमनीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने ।
११. कोशी अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने,
१२. मेची, तमोर, कोशी, तामाकोशी कोरिडोर अयोजना तथा राजमार्गको निर्माण एवम् स्तरोन्नतिको कामलाई निरन्तरता दिइने,
१३. मिर्चैया– कटारी, घुर्मी– सल्लेरी सडक सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन,
१४. पूर्व– पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा– इनरुवा खण्डको निर्माण आरम्भ गरिने,
१५. आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकास गर्ने क्रममा कोशीको चतरादेखि तुम्लिङटारसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने,
१६. अन्तरदेश हवाई सम्पर्क र बिस्तार गर्न विराटनगर र नेपालगञ्जमा नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण शुरु गरिने,
१७. तेह्रथुमको चुहानडाँडामा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन,
१८. चन्द्रगढी विमानस्थलको सुधार तथा स्तरोन्नति गर्न र ट्रंक रुटका विमानस्थलको स्तरोन्नति एवम् विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालनयोग्य बनाउने ।
आदर्श युवा क्लब झोराहाटद्वारा राहत वितरण
विराटचोकः ग्रामथान गाउँपालिका वडा नं २ मा अवस्थित आदर्श युवा क्लब झोराहाटले वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर अति विपन्न, असहाय र अपांगता भएका घर परिवारहरुलाई राहत वितरण कार्य शुरु गरेको छ ।
शुरुमा धेरै संस्थाले राहत वितरण गरे पनि पछिल्लो समयमा राहत वितरण कार्य बिस्तारै कमी हुँदै आएको छ । गाउँपालिकाको तर्फबाट पहिलो चरणमा राहत वितरण गरिएका घर परिवारमा अहिले छाक नै टार्न समस्या परेको बेला क्लबले घरदैलोमा नै गएर राहत वितरण कार्य थालेको आदर्श युवा क्लबका अध्यक्ष शरद लुइँटेलले बताए ।
क्लबका पूर्व अध्यक्ष टीकाराम खतिवडाले ५० घरपरिवारलाई पुग्ने राहात सामाग्री क्लबलाई हस्तान्तरण गरेको हो । हाल क्लबले १ सय १ घर परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको जनाएको छ । चामल १० केजी, तेल १ पाेका , आलु २ केजी, नुन १ केजी र हात धुनका लागि एउटा साबुन समेत वितरण गरेको क्लबका कोषाध्यक्ष सोशन तुलाधरले बताए ।
२१ पैसा घट्यो डलरको भाउ
विराटचोकः आज अमेरिकी डलरको भाउ २१ पैसा घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो छ आज जेठ १७ गतेको लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दरः